Mụta ụzọ aghụghọ na ihe nzuzo nke ezigbo onye ntanye onwe ya iji họrọ oge a.
Kedu ezigbo tan ịhọrọ?
Ebe ọ bụ na nso nso a, ndị dọkịta amalitela ịlụ ọgụ megide tanning salons. Dika o siri pụta, igbanwe agba akpụkpọ dị otú a na-emerụ ahụ ike, ebe ọ bụ na ọrịa cancer nwere ike ịbawanye ụba. Ma achọghị m igbochi onwe m ka m jiri ọla kọpa na-adọrọ adọrọ. Ya mere, naanị ihe ọzọ na-eme ka ìhè anyanwụ na-acha bụ nchịkọta onwe onye. Kedu nke ka mma ịhọrọ na otu esi eji ya, anyị ga-atụle n'isiokwu a.
Ngwọta ọrụ ebube na cosmetology
Ọtụtụ n'ime ụmụ nwanyị nwere mmekọahụ nwere ahụmahụ nke nkwurịta okwu na ụzọ dị egwu nke a na-akpọ "bronzant". Na ọ bụ ezie na ọgbọ ndị mbụ dị otú ahụ adịchaghị irè ma weta nhụsianya, ndị na-emepụta oge a na-arụ ọrụ dị mma. N'iburu n'uche arịrịọ ndị inyom na ọganihu na nkà na ụzụ, ọhụụ ọhụrụ dị iche iche na-arụ ọrụ:
onwe-tanning na-enye ụda akpụkpọ anụ mara mma, na-enyekwa ya nri, moisturizes ma na-echebe ya site kpọmkwem ìhè anyanwụ;
ọtụtụ lotions nwere obere microparticles nke na-ebu ibu eji achọ.
Kedu otu esi ahọrọ ude mmiri toning?
Ma, ọtụtụ ndị na-achọsi ike chọrọ ịmatakwu - ihe, olee otu na ihe e si agwọ ọrịa a. Ya mere, ịhọrọ nke autosunburn iji mee nke ọma, ị kwesịrị ịṅa ntị na ụfọdụ atụmatụ nke ngwaahịa a.
E nwere ụdị abụọ nke autosunburn - ndị na-egbu ọkụ na ndị na-emepụta ihe.
Ndị na-emepụta onwe ha bụ ude nke nwere mmetụta dị nro na akpụkpọ ahụ. Ha nwere mpaghara pụrụ iche - dihydroxyacetone (DHA), nke na-arụkọ ọrụ ọnụ na keratin nke derms ma na-enye akpụkpọ ahụ ụrọ. N'ikwu ya n'ụzọ ọzọ, enwere mmeghachi omume nke nsị nke mkpụrụ ndụ keratin. Ngwọta dị otú ahụ anaghị akpata allergies ma daa na akpụkpọ ahụ. Ihe ga - apụta mgbe 1-2 awa gasịrị, onyinyo ndị na - akpata ga - enwekwa ihe gbasara 6-8 dsutok.
Ndị na-eme ihe ntanetị, kama nke ahụ, gbanye akpụkpọ ahụ ozugbo. Okwesiri iburu n'uche na ihe di otua a abughi onye nwere ike ikwusi "site na mmiri n'oge kachasie ike. Ọ bụ ezie na, ọ bụrụ na ị na-apụ iji nọrọ jụụ mara mma maka otu uhuruchi - nke a bụ nhọrọ kasị mma.
Nhọrọ nke autosunburn site na ụdị akpụkpọ ahụ
Mgbe ị na-azụrụ ude a, ị ga-atụle ọdịdị ahụ gị. Ya mere, na-acha na-acha ọcha na-acha isi awọ na-achọ mma nke ude nke na-ahụ kpụ ọkụ n'ọnụ "ọchịchịrị" ga-abịaru nso. Ọ ga - enye ohere iji kpuchie ogho ọla ma chebe akpụkpọ ahụ site n'ọchịchịrị n'okpuru mmetụta nke ụzarị anyanwụ.
Na-ekpebi nke kachasị mma maka ụmụ agbọghọ nke South European ụdị, ọ dị mkpa ilekwasị anya na akara ngwaahịa a kpọrọ "ọkara". Ebe ọ bụ na ọ bụ onye na-ahụ aja aja, chestnut ma ọ bụ agba aja aja, mgbe ahụ, oke ike nke ntachu ga-adabara ha.
Ma achacha achacha akpụkpọ anụ kachasị mma iji nye ude nke ike na-adịghị ike, nke akara ngosi "ọkụ" ahụ.
Iwu maka iji onwe-tanning
Enweghị ngwa ngwa nke onwe-tanning nwere ike iduga n 'utịp dị ka indelible stains na stains. Ya mere, ịkwesiri ịgbaso ụfọdụ iwu maka iji ude a.
Akpa, mee ule nke ahu anataghi. Gbasaa ngwaahịa ahụ n'aka nkwekọrịta gị ma ghara ihichapụ maka awa asatọ. Ọ bụrụ na mmeghachi omume na-adịghị mma - ọdịdị nke rashes, ntụ ọbara ọbara, wdg, tụfuo iji autosunburn.
Jiri naanị akọrọ na anụ dị ọcha.
Zere imebi iwu n'ehihie nke usoro - ndò ga-edina ụgha.
Tupu autosunburn ọ bụ na-achọsi ike ịchacha akpụkpọ anụ.
Tinye ude site na ala elu, na-ekesa ọdịnaya dị na ngwegharị okirikiri. Gbalịa ime ihe niile ngwa ngwa na n'ụzọ ziri ezi.
Ejila tanning tanning maka ihu ahụ maka ahụ.
Ojiji nke Vaseline, ihe ndị o mere na ụdị
Ngosiputa mma, ihe omimi nke ihe ntecha
Kedu otu esi ahọrọ ihu aka nri?
Ihe ịchọ mma na-achọ mma
Ihe niile gbasara nlezianya ahụ
Mma na Ịtali: ọhụụ ọhụrụ "Sophia Loren No. 1" site na Dolce & Gabbana
Esi ewepụ ihe ịchọ mma na anya?
Esi mee ka onye ọ bụla kwere na ị kachasị mma
Ọgwụ ahụ n'oge ime
Echiche Ista mbụ: anyị na-eji akwa aka agba agba maka Ista
Usoro nke isi ịhịa aka n'ahụ
Kedu ụdị omenala agbamakwụkwọ ahụ?
Kedu ka ị ga-esi gosi onye ị chọrọ ịlụ ya
Achịcha na mọstad ihendori
Na-ahụ maka Horoscope Ịhụnanya maka 2015 maka Aquarius
Ụzọ ndị mmadụ na-ewepụ isi
Mgbaàmà nke ọrịa dị iche iche gynecological
Buckwheat achicha na obi cheese
Oxygen mmanya maka ụmụaka
Kedu otu esi ahọrọ uwe, na-aga maka nyochaa?
Masks maka akpụkpọ anụ
Nri anụ na-esi na oven
Okpomoku maka Jenụwarị 2018 - nwanyi Sagittarius - site na Tamara Globa na Angela Pearl